I-china ngokwezifiso i-M10 yokulinganisa izinyawo zefenisha Abakhiqizi - Dongguan Qiaofeng Plastic Hardware Products Co., Ltd.
Ikhaya > Izingxenye zefenisha yePlastiki > Izinyawo zokulinganisa ezingaguquguquki > M10 izinyawo zokulinganisa ifenisha
Ziyini izinyawo zefenisha eziguquguqukayo?
Izinyawo ezilungiselelwa ifenisha, ezibizwa nangokuthi ama-foot pads, zisebenzisa izikulufo ukuxhuma phansi kwefenisha (amatafula, izihlalo, amabhentshi) ukuvikela phansi ukugqoka, ukunciphisa umsindo, nokwandisa ukuphakama kwefenisha.
Ububanzi besicelo (umzimba omncane, inhloso enkulu): amakhabethe / izinyawo zekhabhinethi, njll .; ifanele izikhathi eziningi, amashalofu edeski, njll.
Udinga unyawo olulungisekayo ukonga umsindo odalwa yiphansi lefenisha yansuku zonke ngaphandle komcamelo uma unyakaza, futhi kungavimbela naphansi ukuthi igqoke futhi ivumele ifenisha yakho ukuthi isebenzise ngokunethezeka.
Ubuciko bokubonisa: Ubuciko obushaqisayo nobucijile, ukusakaza intambo, ibanga lengcindezi efanayo nokubukeka okuhle, ubuciko.
[Igama lomkhiqizo]: Iphedi yonyawo eguquguqukayo
[Imboni Yezimpahla]:IGuangdong, China
[Umbala wezimpahla]: iraba elimnyama kuphela / imibala eminingi
[Ukusetshenziswa kwempahla]:Ifenisha unyawo adjustable pad
Usayizi:I-M10 * L35
Izici zomkhiqizo:iqinile futhi izinzile, inciphisa umsindo, ivikela umhlabathi ekulimaleni
Ukusetshenziswa komkhiqizo:ilungele amalunga wamatafula, amatafula, indle, njll.
Ukuthengisa okuqondile kwemboni, ukucubungula okwenziwe ngokwezifiso
Ukupakisha nokuthumelayeM10 izinyawo zokulinganisa ifenisha
Yamukela izikhwama zepulasitiki ezihlukile ezithuthukisiwe, futhi iphrinta uphawu lwakho kuma-polybags.
Ukupakisha okwenziwe ngokwezifiso kuyatholakala.
Kuya ngobuningi be-oda lakho ngemuva kokuqinisekisa i-oda.
Thumela ngomkhumbi noma ngolwandle njengoba ucelile.
1. Unayo imboni yakho?
Yebo, singumkhiqizi eChina iminyaka engaphezu kwengu-10. Kwemboni yethu itholakala esifundazweni Guangdong.
2. Ngingayivakashela kanjani imboni yakho?
Ama-Pls ngomusa asazise kusenesikhathi uma uhlela ukuvakasha. Singakukhombisa indlela noma sikulande esiteshini noma esikhumulweni sezindiza.
3. Ingabe unikeza amasampula amahhala?
Lokho akunankinga, singathumela isampula yamahhala ukuze isetshenziswe.
4. Ungaphrinta i-LOGO yenkampani yethu ku-nameplate nakuphakheji?
Yebo. Singayamukela, ukusekelwa okuhle kakhulu kunganikezwa kumakhasimende ethu.
5. Uzokwenza nini ukulethwa?
Kuzoya ngobuningi be-oda lakho, inani elincane elizoletha izimpahla ngo-7-10days. Uma i-oda lakho likhulu ngokwanele, lithatha izinsuku eziyi-10-15.
6. Ungabugcina kanjani ubudlelwano obuhle ebhizinisini lethu ngokuhamba kwesikhathi?
a. Sigcina intengo enhle nekhwalithi yokuncintisana ukuqinisekisa ukuthi amakhasimende ethu ayazuza;
b. Sihlonipha wonke amakhasimende njengomngani wethu futhi ngobuqotho senza ibhizinisi futhi senza ubungani nawo, noma ngabe avelaphi.
7. Uma uthenga umkhiqizo wakho. Kepha lapho kutholakala izinkinga zekhwalithi, ungazixazulula kanjani?
Ngemuva kokuqinisekiswa, uma inkinga yekhwalithi ibangelwa thina hhayi umkhakha wangaphandle, sizonxephezela ucezu ngalunye kumakhasimende.
Amathegi ashisayo: Izinyawo zokulinganisela ze-M10 zefenisha, iChina, Kwenziwe ngentando, Abakhiqizi